सरुमारानीमा स्कुल बस देखावटी मात्र !
दैनिक १० किलोमिटर हिड्छन बालवालिका
शुक्रवार, आश्विन ८, २०७८ प्यार अलि खाँन
प्यूठान : स्कूल बस नियमित नचल्दा सरुमारानी गाउँपालिका क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले सास्ती खेपेका छन् । सरुमारानी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बडडाँडा अवस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयले विगत चार वर्ष देखि स्कुल बस सञ्चालन ल्याएको थियो । तर, विद्यालयले बसलाई निरन्तरता दिन सकेन् ।
कोरोनापछि पनि अवस्था सामान्य भएर विद्यालय खुल्दा बस चलेको छैन् । बस संचालन नहुँदा मान्द्रे, कुडुले, छत्तिउनदमार, मोतिपुर, ठाडी ओडार, थकलेनी, कालीखोला लगायतका ठाउँबाट अध्ययन गर्न आउने बालबालिकाहरुलाई सास्ती छ । ६ देखि करिब १० किलोमिटर टाढाको दुरीबाट विद्यार्थी आउजाऊ गर्दा उनीहरु बीचमै थाक्ने गर्छन् । उनीहरूको पढाईमा समेत बाधा पर्ने गरेको अभिभावकहरु गुनासो गर्छन् ।
प्यूठान–भालुबाङ सडकमा गुड्ने सवारी साधनलाई नमस्ते गर्दै रोक्ने बालबालिकाहरुको पिडा तथा समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न नसकिएको जनता माविका प्रधानध्यापक योग कुमार पाण्डेले बताए । ‘हामीले स्कूल बस खरिद गर्न सुरुमै गाउँपालिकासंग २० लाख बजेट माग गरेका थियौं’,पाण्डेले भने, ‘बाँकी पैसा हामी भैलो खेलेरै भएपनी व्यवस्थापन गर्ने सोचमा थियौं ।’ पालिकाले दिँदै आएको वार्षिक अनुदानले भाडामा स्कूल बस सञ्चालन गरेको उनले बताए ।
यस आर्थिक वर्षमा पनि ५ लाख रुपैयाँ पालिकाबाट बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी गराए । ‘अनुदानले मुस्किलले ५ महिना बस चल्ने हो ।’ उनले दिगो समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकासँग आग्रह गरे । बस भाडाको दर–रेटमा छलफल चलिरहेकोले छिट्टै बस सेवा सुचारु हुने प्रधानाध्यापक पाण्डेले जानकारी दिए । हालसम्म पालिकाबाट यस आवमा दिने अनुदान सहित १९ लाख रुपैयाँ स्कूल बस व्यवस्थापनमा बजेट व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बजेट दिएर पनि समयमै विद्यालयले स्कूल बस संचालन गर्न नसकेकोमा गाउँपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘हामीले रकम उपलब्ध गराएका छौं बस खोज्ने चलाउने त विद्यालयले हो नि ?’ गाउँपालिका अध्यक्ष झग बहादुर बिश्वकर्माले भने, ‘विद्यालय प्रशासनले अहिलेसम्म बस खोजेर चलाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो ।’ स्थानीयले विद्यार्थीका लागि संचालन गरेको स्कुल बस देखावटी मात्र भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, आश्विन ८, २०७८, ०८:०९:२९
आहा ! सानदार झिमरुकको सिँहदरवार बिहिवार, माघ १३, २०७८ 952